यसरी हुँदैछ लक्ष्मीको बाटो परिवर्तन
January 26, 2019 6:58 am
Share : 1,866
करिब दशकदेखि गीत, संगीतमा सक्रिय लक्ष्मी आचार्य बेलाबखत चर्चामा आउँछिन् । लोक, देउडा र आधुनिक गायनमा अब्बल उनी फोटो सुटमा पनि उत्तिकै बोल्ड रुपमा प्रस्तुत हुन्छिन् । उसो त उनी मोडलिङमा पनि दरो रुपमा उभिने प्रयत्नमा छिन् । केही समयअघि मात्रै उनले सुदूरपश्चिमको देउडा गीत जुम्लाकी बड्डीमा अछामी बड्डाको जोडीका रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेकी छिन् । उनको अभिनय निक्कै रुचाइएको छ । उनीसँग गरिएको अक्षर संवाद :-
गीत, संगीतमै व्यस्त छु ।
कस्ता गीतहरुमा आफू बढी फिट छु ठान्नुहुन्छ ?
हुन त म सबैखाले गीतमा सुहाएकै हुन्छु । आधुनिकमा अलि बढी रुची हो, गाएकी पनि छु, तर बढी गीत भने लोकदोहोरी प्याटनमै गाइएको छ ।
पछिल्लो समय बजारमा आएको जुम्लाकी बड्डीले कस्तो रेस्पोन्स पाउनुभएको छ ?
रेसियोको आधारमा हेर्ने हो भने यो गीत सार्वजनिक भएको छोटो समयमै अन्य गीतको तुलनामा निक्कै रुचाइएको छ । हुनलाई यो टिपिकल देउडा गीत हो, तर यो गीत रुचाउनेहरुको संख्या पूर्वदेखि पश्चिमसम्म उस्तै छ ।
भरखरै एपिक म्युजिक अवार्ड पाउनुभयो, केका लागि दिइएको थियो उक्त सम्मान ?
गासौँला मायाको डोरी बोलको मेरो देउडा गीतका लागि सर्वोत्कृष्ट गायिकाको सम्मान दिइएको हो । यसमा राजेन्द्र शाह बिपीका शब्द, संगीत, ऐरेन्ज र स्वर विनोद बाजुरेलीको हो । फिमेल आवाज मेरै रहेको गीतमा अभिनय पनि मैले र चक्र बलमे गरेका छौँ । गीतको म्युजिक भिडियोको निर्देशन भीम थापाले र छायांकन करन चैसिरले गरेका हुन् ।
देख्दा आधुनिक देखिनु हुन्छ, गीत, संगीतमा दूरदराजका टिपिकल स्थानीय लय र शैलीलाई पक्रनु हुन्छ ? यसको खास कारण केही छ ?
गीत, संगीत समाजकै भाषा हो । परिवेशकै बोली हो । मैले संगीतमा त्यो धर्म जोड्नै पर्छ । बाँकी म कस्तो देखिने, के लगाउने र कस्तो खाने भन्नेविषय त मेरो निजी विषय होला नि ? होइन र ?
आजसम्म कतिवटा गीत, संगीत गर्नु भयो ?
करिब, सयको हाराहारीमा गीतहरुमा आवाज दिएकी छु । एक दर्जनभन्दा बढीमा अभिनय पनि गरेकी छु । यीभित्र लोकदोहोरी, आधुनिक र देउडा गीत छन् । मैले आवाज दिएकामध्ये लोकदोहोरी अलि बढी छन् ।
अभिनय पनि गर्नुहुन्छ ? गायिकाले अभिनय पनि गर्दा न्याय हुन्छ त ? यी दुबै विधालाई संगै लग्न कति सम्भव छ ?
मेरो खास ईच्छा गायन नै हो, तर कतिपय गायक, गायिकाले गायनभन्दा महंगो मूल्यमा अभिनय गरिरहेका छन् । दर्शकले कुन रुपमा लिए भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । कलाकारमा सबै गुण हुनुपर्छजस्तो लाग्छ । तर अन्याय हुनेगरी रहर लाग्यो भन्दैमा आफूले नसक्ने र नजान्ने कुरा दर्शक, श्रोतालाई थोपर्न भने हुन्न ।
केही समय अघि तपाईँको तस्बिरलाई लिएर निक्कै चर्चा भयो ? खासमा के हो ?
त्यो एक वर्ष पुरानो तस्बिर हो, त्यसबेला त्यो तस्बिर समयसान्दर्भिक थियो । त्यसबेला चर्चाको विषय बनेन । तर पछिल्लो समय कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो । केही मान्छेले फेक आइडी बनाएर त्यो घटनासँग मेरो पत्रिकामा छापिएको तस्बिरलाई दाँजेर विवादमा ल्याइयो । त्यो तस्बिरमा त्यस्तो धेरै अपाच्य केही थियो जस्तो लाग्दैन । आम जीवनमा पनि मानिसहरु ग्ल्यामर बनेर हिँडेका हुन्छन् तर त्यो कलाकारिताका लागि लिइएको तस्बिर थियो । विनामतलब मलाई विवादमा ल्याइयो । यो सोचको पनि कुरा हो, मानिसले कुन आँखाले, कुन सोचले, कुन परिवेशमा हेर्यो ? त्यसमा पनि भरपर्छ । तस्बिर मेरै थियो, त्यो तस्बिर छापिएको समयभन्दा एक वर्षपछि आएर कतिपय मानिसले उग्रता प्रदर्शन गरे, पत्रिका जलाय त्यसमा पत्रिकाको दोश थियो जस्तो मलाई लाग्दैन । फरक परिवेशमा आएर ठूलो जमातले मेरो तस्बिर जुन हिसाबले मूल्यांकन गरेर चित्त दुखाउनुभयो, त्यसप्रति म पनि दुःखी छु ।
विभिन्न मिडियाहरुमा यहाँका उत्तेजक अन्र्तवार्ता र तस्बिरहरु आइरहेका हुन्छन् ? यो चर्चाका लागि कि रहरले हो ?
विभिन्न मिडियाले अन्र्तवार्ताका लागि बोलाउछन् । नजाँदा घमण्डी भएजस्तो हुन्छ । गएर अन्र्तवार्ता दियो भने अलिक नराम्रो पक्षलाई फोकस गर्ने गरिन्छ । आफ्नो भ्युअर र पाठक वृद्धिका लागि पनि त्यसो गरिएको हो कि जस्तो लाग्छ । म मात्र होइन हरेक कलाकार यस्तो समस्यामा छन् जस्तो लाग्छ । फेरि एउटा कलाकारले दिएको अन्र्तवार्ता रुवाउन, दुःखी बनाउन वा सिरियस बनाउनका लागि पनि हुनुपर्छजस्तो लाग्दैन । कलाकारले कलाबाट मात्रै नभएर उसको अन्र्तवार्तादेखि लवाइ, खवाइबाट पनि समाजले आनन्द दिनसक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । तर नबोलेको कुरा लेखेर, खोजी खोजी उत्तेजक तस्बिर छनोट गरेर समाजमै भ्रम छर्ने गरी कसैले सामग्रीलाई प्रयोग नगरिदिन पनि अपिल गर्छु ।
कलाकारितामा लागेर आर्थिक रुपमा जीउन कति सम्भव छ ?
गाह्रो, साह्रो त छ । पैसाभन्दा पनि नाम छ, दर्शकले माया दिनुभएको छ । पैसा जति भए पनि पुग्दैन । यो सबैको पीडा हो । साझा समस्या हो जस्तो लाग्छ । आफूले गरेको कामप्रति खुशी र सन्तुष्ट हुनु नै ठूलो कुरा हो । गरिरहेको कामलाई न्याय गर्न सक्नुपर्छ ।
जीवन निर्वाह त गर्न पर्छ होला नि ? त्यो कसरी चल्छ ?
कार्यक्रमहरुमा गइन्छ, पारिश्रमिक लिइएको हुन्छ । महोत्वसक, मेला, कन्सर्ट, देश विदेशको कन्सर्टमा जाँदा लिएको पारिश्रमिकले चलिरहेकै हुन्छ ।
देख्नमा सुन्दर हुनुहुन्छ, योङ, इनर्जेटिक पनि, प्रेम प्रस्तावहरु कत्तिको आउँछन् ?
मलाई हेर्ने, दर्शक, स्रोताको हेर्ने आँखा नै राम्रो हो । आर्टिस्टलाई मन पराउने हजार हुन्छन् । त्यो समान्य कुरा हो । प्रेम नै गर्छु भन्ने पनि धेरै छन् । तर सबैसँग गरेर सम्भव कुरा होइन, टार्ने हो, टारिन्छ ।
कसैसँग प्रेममा हुनुहुन्न ?
त्यस्तो छैन । भोलीको कुरा कस्ले देखेको छ र ? अहिले म मेरै करियरमा केन्द्रित छु ।
सेक्सलाई जैविक आवश्यकता भनिन्छ ? उमेर भएजस्तो लाग्दैन ?
सेक्स जैविक आवश्यकता हो । म स्वीकार्छु । तर समाजलाई वा कसै अरुलाई असर पर्ने गरी, कसैको जीवनमा आँच आउने गरी यसलाई प्रयोग गर्नु हुन्न । निश्चित सीमा र मर्यादामा रहेर दुवै पक्षको मन मिल्दा कसैलाई नकारात्मक प्रभाव नपर्ने गरी यसको उपभोग गर्दा खाकाशै खस्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
आजसम्मको उमेरमा आइपुग्दा उपभोग गर्नुभयो कि भएन त ?
आजसम्म त्यस्तो भएको छैन, त्यस्तो मन मिलिहाल्ने पनि भटेको पनि छैन । त्यस्तो उपभोग गरिएछ भने अर्कोपटकको अन्र्तवार्तासम्म आइपुग्दा यसको जवाफ दिउँला ।
अन्तिमा, आगामी योजनाबारे भनिदिनुस न ?
सकेसम्म आजसम्मका कामभन्दा अझै राम्रा काम गर्ने अवसर मिलेका छन् । मेरो तर्फबाट गीत, संगीतलाई अझै उत्तम बनाउने प्रयत्न गर्ने छु । अब जानअन्जानमा सस्तो लोकप्र्रियता होइन, कलाकारिताको मजबुत यात्रा गर्ने सोचमा छु । अब ठूलो पर्दातिर पनि पाइला राख्छुहोला भन्ने संकेत मात्रै गर्न चाहन्छु ।